China Dongshen ọhụrụ imewe ahịhịa ahịhịa setịpụrụ 14pcs ọlaọcha eriri sịntetik ajị ọla kọpa ferrule osisi aka ọkachamara etemeete omenka ngwá ọrụ ịchọ mma ahịhịa emeputa na Supplier | Dongmei
Dongshen ọhụrụ imewe ahịhịa ahịhịa 14pcs ọlaọcha eriri sịntetik ajị ọla kọpa ferrule osisi aka ọkachamara etemeete etemeete ngwá ọrụ ịchọ mma ahịhịa
N'iji brushes etemeete dị iche iche dị 14, nke ọ bụla ahaziri nke ọma iji dozie akụkụ dị iche iche nke agba, 14 iberibe studio studio setịpụrụ na -elebara ihu anya n'otu oge n'otu oge na -ekepụta enweghị ntụpọ na nlele ọ bụla. Mara mma, mara mma ma nụchaa, nchịkọta a ga -eme mgbakwunye dị egwu na tebụl mgbakwasa mara mma ọ bụla. Bụrụnụ ndị ejikere ejikere emebe ihe eji emegharị ihe eji arụ ọrụ nke sitere na DONGSHEN.
Ntutu mikuku Ntutu isi
- Ọkachamara etemeete etemeeteỌ dị nro ma dị mkpụmkpụ, njikwa ergonomic na -enye gị ohere ịgwakọta na ntọala, mmiri mmiri, ude na ntụ ntụ na -enweghị ike ọgwụgwụ ma ọ bụ ihe mgbochi aka… ngwa ngwa na mfe karịa ka ọ dị na mbụ. Onye mebere brushes setịpụrụ ọkachamara nwere, ahịhịa ihu, brushes, brlush brush, ahịhịa ntụ ntụ, ihe mkpuchi anya nke na -eme ka anya gị dị mma iji mezie mmezi gị n'emebighị akụ.
- Njikwa aka dị elu nke ọkachamara etemeete ahịhịa. Iwe na-adịghị n'akpụkpọ ahụ, na-awụpụ.
- Jiri brushes Flat na Angled concealer jiri nka kpuchie ntụpọ ma ọ bụ ezughị okè ọ bụla.
- Ntutu isi na -adịkwa ọcha ma na -adịte aka maka ịrụ ọrụ ọkachamara.
* A ga -aza ajụjụ gị n'ime awa 24.
* A ga -echedo ozi nzuzo gị niile na echiche ngwaahịa.
* Ikike ịzụlite ngwaahịa ọhụrụ nwere ike inyere gị aka ịgbasa ahịa gị.
* Ọdịdị dị elu na ọnụahịa asọmpi.
* Oge nnyefe ngwa ngwa yana ezigbo ọrụ.
* Anyị nwere ngalaba nhazi ọkachamara.
* OEM & ODM na -anabata.
* Ị nwere ike ịzụta ngwaahịa na -eme gị afọ ojuju.
* Enwere ike ịhọrọ ọtụtụ ngwaahịa.
Ajụjụ: Ị bụ ụlọ nrụpụta ma ọ bụ azụmaahịa?
A: Anyị bụ ndị nrụpụta ọkachamara na China, anyị nwere ahụmịhe mmepụta afọ 35.
Ajụjụ: Enwere m ike ịnweta usoro nlele?
A: Ee, ọ ga -amasị anyị ịnye gị nlele n'efu ma ọ bụrụ na anyị nwere nchekwa. Maka nlele elegharị anya, ọ ga-ewe ụbọchị 7-10 ka emechara ya.
Ajụjụ: Olee mgbe m nwere ike nweta ọnụahịa ahụ?
A: Anyị na -enwekarị n'ime awa 24 ga -ezitere gị ndepụta ndepụta.
Ajụjụ: Ọ bụ n'efu ka ibipụta akara ngosi?
A: A na -anabata akara ngosi efu ma ọ bụrụ na ọnụọgụ gị ruru MOQ.
Ajụjụ: Kedu ihe bụ isi ngwaahịa gị?
A: Ngwaahịa anyị bụ brushes etemeete, ịkpụ afụ ọnụ ma ọ bụ ahịhịa afụ ọnụ, ngwaọrụ etemeete na ngwaọrụ ịkpụ afụ ọnụ.
Ajụjụ: Ị nwere ike chepụtara m?
A: Ee, anyị nwere ike chepụta dịka arịrịọ ndị ahịa, aha ụlọ ọrụ, akara ekwentị, akara ngosi, wdg.
Ajụjụ: Ogologo oge ole ka mbupu gị dị?
A: Oge izizi mbụ maka onye ahịa ọhụrụ na -abụkarị ụbọchị 50. Mgbe ọtụtụ nkwekọrịta dị n'etiti anyị, enwere ike belata ya ruo ụbọchị 30 ~ 45.
Nke gara aga: 12pcs ịchọ mma ahịhịa setịpụrụ obi ọjọọ-free vegan sịntetik ntutu nwa osisi aka onwe labelụ ihu etemeete ahịhịa set
Osote: Ahaziri ahaziri ahaziri onwe ya n'ùkwù 12pcs rose etemeete ahịhịa setịpụrụ ntụ ntụ ime ihi ihe na -egosipụta nkuanya nku anya na -agwakọta ngwa ọrụ ihe ịchọ mma.
ịchọ mma ahịhịa set
Ejiji etemeete setịpụrụ ahịhịa etemeete ọkachamara
Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete
Dongshen etemeete ahịhịa vegan enyi na enyi sịntetik ...
Dongshen okomoko adụ akpụkpọ-enyi na enyi ewu ntutu wo ...
Dongshen kabuki ahịhịa factory inogide vegan syn ...
Ọkachamara ọcha vegan sịntetik ntutu osisi ...
Ntọala ịkpụ afụ ọnụ, Ịkpụ afụ ọnụ, Mee Ncha, Nịm etemeete ahịhịa, Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete, etemeete ahịhịa setịpụrụ,